PHOTOSHOP မှာအားနည်းချက်ကို IMAGE ကိုအောင်လုပ်နည်း - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာအားနည်းချက်ကို image ကိုအောင်လုပ်နည်း
အတော်များများကအသုံးပြုသူများကိုကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်ရသောအခါ, ဒါမှမဟုတ်နားကြပ်ကသုံးပြီးသီချင်းနားထောင်ခြင်းအခါ။ သို့သော်လူတိုင်းမမှန်ကန်စွာသူတို့ကို configure နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့7windose ပြေးတစ်ဦးကို PC ပေါ်တွင်အသံစက်ပစ္စည်းများ၏အကောင်းဆုံး setting များကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: windose7နှင့်အတူသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံကို set up လုပ်နည်း
သူတို့က high-quality သံကိုမျိုးပွားနိုင်အောင်ကွန်ပျူတာနားကြပ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်ညှိကိရိယာရန်သေချာစေပါ။ ဤသည်ဖြစ်စေအသံကဒ်ကိုထိန်းချုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုတဆင့်ပြုသောအမှုများနှင့်သာနှစ်မြှုပ်ထားသောကိရိယာတန်ဆာပလာအသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုညှိအဆိုပါ PC ကိုပေါ်နားကြပ် setting များကိုထိုအမှုနည်းလမ်းများမှထွက်ရှာကြစို့ 7. windose နိုင်ပါသည်။
Method ကို 1: dispatch soundcard
ပထမဦးစွာကျနော်တို့နားကြပ်အသံကမန်နေဂျာမှတဆင့်ပွုပွငျပွောငျးလဲဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ VIA, HD adapter များအတွက်နမူနာအစီအစဉ်တွင်လုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခု algorithm ကိုဖော်ပြရန်။
စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့စေ "Control Panel ထဲက".
ဖွင့်လှစ် "VIA, HD".
Manager က VIA, HD သံကိုစတင်သည်။ အားလုံးထပ်မံစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုခြေလှမ်းများအတိအကျကထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပထမဦးဆုံး start သောအခါမူကား, သင်တကယ်တော့သူတို့ကချိတ်ဆက်ထားလျှင်ပင်, ဒီ software ကို၏နားကြပ် interface ကိုတွေ့မြင်ပေမယ်သာစပီဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ display ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ, ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့် Options".
ထို့နောက်မှအ switch ကိုပြန်စီ "ပြန်ညွှန်းနေပါသည်နားကြပ်" အနေအထား "လွတ်လပ်သောနားကြပ်" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အဆိုပါစနစ်အ device ကို update ။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်အဲဒီနောကျ VIA, HD interface ကို "ပြသမှု Device ကို" နားကြပ်အိုင်ကွန်ကိုပြသနေသည်။
ယင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Ext mode ကို".
အပိုင်း "Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး" ယင်းနားကြပ်၏ sound volume ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက slider ကိုဆွဲယူခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လက်န့်သတ်ချက်ကဆွဲယူအကြံပြုပါသည်။ ဒါကအသံကျယ်သောအသံဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ mediaproigrvatel, တမန်, etc: တစ်ဦးကထပ်မံထားပြီးကစားပရိုဂရမ်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်တန်ဖိုးပမာဏကိုထိန်းညှိ
သို့သော်လိုအပ်ခဲ့လျှင်တစ်ဦးချင်းစီချိန်ညှိခြင်းနှင့်အသီးအသီးနားကြပ်ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Volume ကိုထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ကို".
အခုတော့ဒီဒြပ်စင်ကိုကျော်စွန့်ပစ်, လက်ျာနှင့်လက်ဝဲဘက်ခြင်းလျှော, ဆွဲအားဖြင့်ကသက်ဆိုင်ရာနားကြပ်ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်းကိုသွားပါ "ဆက်တင်များစပီကာများနှင့်စမ်းသပ်မှု"။ ဤတွင် volume ကို alignment ကိုစတင်သည်နှင့်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီနားကြပ်ခြင်းအသံစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ချက်ချင်းသင့်လျော်သောခလုတ်ကိုသက်ဝင်ဖို့လိုပါတယ်, အဲဒီနောက်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "အားလုံးစပီကာစုံစမ်း"။ တနားအပါး၌ပထမဦးဆုံးသံကိုမျိုးပွါးကိုဖွင့်ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေ, အဲဒီနောက်ဒုတိယလိမ့်မည်။ ထိုသို့သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသံ level ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
tab ကို "ပုံမှန်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ" ဒါဟာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ကွက်အပေါ်တစ်ဦးကလစ်နှိပ်ထုတ်လုပ်တစ်နမူနာအကြိမ်ရေအဆင့်နှင့် bit နဲ့ resolution ကို၏တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင် parameters တွေကိုချမှတ်မြင့်, အသံပိုကောင်းဖြစ်သင့်သည်ကိုထိုအခါသတိရသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုမိုစနစ်ကအရင်းအမြစ်များကိုယင်း၏မျိုးပွားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဒီတော့ options အမျိုးမျိုးကြိုးစား။ သင်တစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်ကို select လျှင်, သင်အသံအရည်အသွေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောအမြတ်သတိထားမိကြဘူး, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များရန်သင့်နားကြပ်ကမပေးနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ parameters တွေကိုချမှတ်ရန်မသဘာဝကျပါတယ် - က output ၏အမှန်တကယ်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကြောင်းကိုတပ်ဆင်ခမှာသူတို့အကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ tab ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက် "တန်းတူရေး" ဒါကြောင့်အသံ Timbre ကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Element တစ်ခုရဲ့အပေါ်ဒါပေမဲ့ဒီအဘို့, ပထမဦးဆုံးကလစ် "Enable"။ အပြေးသမားဟာသေံတက်ကြွဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, သင်လိုချင်သောအသံအရည်အသွေးအောင်မြင်သောအချိန်တွင်သူတွေကိုရာထူး၌ထားတော်မူ၏နိုင်ပါတယ်ညှိ။ အခါဒဏ်ငွေညှိနှိုင်းမှု function ကို, သင်တစ်ဦးတည်းသာသူတို့ထဲကရွေ့လျားနေဖြင့်ရှိသမျှသောအပြေးသမား၏ရာထူးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကြွင်းသောအရာအချင်းချင်းဆွေမျိုးမူလအနေအထားအရသိရသည်ရွှေ့မည်။
သင်တို့သည်လည်းစာရင်းထဲကခုနစျပါးကြိုတင်အစီအစဉ်များထဲကတစ်ခုရွေးနိုင်သည် "ပုံမှန်က Settings" သင့်ရဲ့နားထောင်ခြင်းဂီတပေါ် မူတည်. ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အပြေးသမားတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဂျအညီဖွင့်စီတန်း။
tab ကို "Ambient အသံ" သင်ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံသံအတိုင်းနားကြပ်ခြင်းအသံစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်၌ဤ function ကိုအသုံးပြုခြင်းမလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပါသည်နားပေါက်တွေရန်, အထူးသဖြင့်၎င်း၏အနီးကပ်မထိုက်မတန်, အဖော်ပြထားအဆက်အသွယ်ကိရိယာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေးတော်မူ၏။ သင်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆန္ဒရှိလျှင်သို့သော်သင်က activate လုပ်နိုင်ပါတယ် "Enable"။ drop-down list ထဲက, လာမယ့် "အဆင့်မြင့် Options" သို့မဟုတ်အောက်မှာသင့်လျော်တဲ့ icon ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးဂျပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးပါ။ အဆိုပါသံကိုအလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထား option ကိုမှချိန်ညှိနေသည်။
tab ကို "အခန်းပြင်ဆင်ခြင်း" လိုအပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသေချာဒြပ်စင်စေရန်ဖြစ်ပါသည် "Enable" ဒါဟာ activated နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤသည်ယခင် function ကို setting များကိုကဲ့သို့တူညီသောအချက်တစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်: အသုံးပြုသူနှင့်အသံအရင်းအမြစ်အကြားအကွာအဝေးကတကယ်တော့သုညဖြစ်တယ်, ထို့ကြောင့်မည်သည့်ပြင်ဆင်ချက်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
Method ကို 2: Operating System Tools
နားကြပ် setting ကိုကိုလည်း built-in operating system ကို tools တွေကိုသုံးနိုငျထုတ်လုပ်ရန်။ သို့သော်ဤ option ကိုနေဆဲယခင်တစျခုထက်လျော့နည်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးစွမ်းသည်။
ကိုသွားပါ "Control Panel ထဲက" အမည်ရှိ "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အသံ".
အဆိုပါချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေများ၏အမည်များ၏ညာဘက်နားကြပ်၏နာမတော်အဘို့အကြည့်ရှုပါ။ သူတို့နာအောက်မှာတစ်ဦး Postscript ခဲ့ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ "ပုံမှန် device ကို"။ နာမတော်ဖြင့်မဆိုအခြားတံဆိပ်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် item ကို select လုပ်ပါ "ပုံမှန် Make".
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အောက်တွင်အလိုရှိသော Registry ကိုပြသပြီးနောက်ဤအကြောင်းအရာအားနှင့်ကလစ်နှိပ် select လုပ်ပါ "Properties ကို".
အပိုင်းကိုသွားပါ "Levels နဲ့".
အများဆုံးတန်ဖိုးကိုဖို့ sound volume ကိုသတ်မှတ်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လမ်းခရီးတရှောက်လုံး, လက်ျာဖို့ slider ကိုဆွဲယူပါ။ သီးခြား VIA, HD Audio အလှဆင်မတူဘဲ, built-in system ကို tools များနှင့်အတူအသီးအသီးနားကြပ်ကိုသင်သည်, သူတို့ကမည်သည့်အမှုတူညီ parameters တွေကိုထဲမှာကြလိမ့်မည်ကိုထူထောင်လို့မရပါဘူး။
သငျသညျ EQ settings ကိုလုပ်လိုလျှင်ထပ်မံသည်, အပိုင်းကိုသွား "တိုးတက်မှု" (သို့မဟုတ် "မြှင့်တင်") ။ 'check box' အတွက်ကို tick ထားပါ "အသံ Enable ... "။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပိုက Settings".
အကောင်းဆုံး corresponds're က VIA HD ကို အသုံးပြု. မှတ်ပုံတင်ထားပြီးကဲ့သို့တူညီသော algorithm ကိုအပေါ် content ကိုနားထောင်ရသောကွဲပြားခြားနားသောရာထူးများ Timbre ညှိဖို့လျှောရွေ့လျားအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ တူညီသော setting ပြီးနောက်ရုံပြတင်းပေါက်ပိတ်ပါ။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာ parameter သည်ပြောင်းလဲစေပါသည်။
ဤတွင်အဖြစ် VIA HD မှာ, က drop-down list ကိုမှတဆင့်ကြိုတင် options များ setting များထဲကတစ်ခုရွေးဖို့ဖြစ်နိုင် "ကြိုတင်ပြင်"ဒါကအလွန်သေံ setting များ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လူမဟုတ်ဟုများအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကို: Windows7ကို run နေတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတန်းတူညီမျှမှု settings ကို
drop-down list ကို Expand "ပုံမှန်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ"။ ဒီနေရာတွင်နည်းနည်းနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်နမူနာမှုနှုန်း၏အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ရွေးနိုင်သည်။ သင် VIA HD ကိုများအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောအကြံပြုချက်များအပေါ် အခြေခံ. select လုပ်ပါလျှင်: သင်၏နားကြပ်မြင့်မားသောအပြင်အဆင်များမှာ run နိုင်မဟုတျပါလျှင်အထူးကြပ်မတ်ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်ဖို့အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်။ ရလဒ်ကိုနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းစာ "ကိုစစ်ဆေးခြင်း".
ကျနော်တို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအားလုံးကိုစစ်ဆေးမှုများသေတ္တာများအနေဖြင့်စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြု "ဘက်စ Mode ကို"တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသံနှင့်အလုပ်လုပ်မျိုးစုံအစီအစဉ်များကို run ဖို့, သင်တို့ရှိသမျှသည်တက်ကြွစွာ applications များထံမှအသံပြန်ဖွင့်မရနိုင်ပါ။
Properties window ကိုအပေါငျးတို့သ setting များကိုပြီးနောက်စာနယ်ဇင်းကျင်းပ "Apply" နှင့် "အိုကေ".
ယင်းနားကြပ်ကို configure တစ် Manager ကို sound card ကိုကဲ့သို့ဖြစ်ရနှင့်ပြည်တွင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒါဟာနေဆဲပထမ option ဒုတိယထက်အသံကညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမှတ်သားရပါမည် 7. windose နိုင်ပါတယ်။